> Resource> Naghachi> PSD File Iweghachite: Olee naghachi ehichapụ PSD Files
Enwere m ike Naghachi ehichapụ PSD Files?
Hey onye ọ bụla, m na nsogbu miri emi. M ehichapụ a PSD faịlụ (Photoshop faịlụ) nke bụ nnukwu ọrụ m nwere ịnapụta site Friday site na mberede. Apụghị m iyi iji chọta ya na m na-enweghị ndabere. Ọ ga-agbake m PSD faịlụ na ụdị ngwá ọrụ? Olileanya onye nwere ike inyere m. Ezi echiche.
Ị nwere ike ịlele egweri biini na kọmputa gị mbụ. Ọ bụrụ na ọ dịghị ebe ahụ, azịza ya bụ ka ee ma ọ bụrụ na ị nwere PSD faịlụ mgbake software. Mgbe a PSD faịlụ Nwela ehichapụ, formatted ọ bụ furu efu, ọ bụghị n'ezie na-efu. Ọ ga-akara dị ka keerughi data site usoro. Ọ ga-efu ruo mgbe ebighị ebi mgbe ọ overwritten site ọhụrụ data na gị mbanye. Nke a pụtara na ị na-yiri ka naghachi PSD faịlụ ma ọ bụrụ na i mee ihe ngwa ngwa ezu ma na-achọta a bara uru Photoshop PSD faịlụ mgbake usoro.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac niile bụ ihe dị gị mkpa iji naghachi ehichapụ PSD faịlụ. Ngwá ọrụ a bụ ike na-agbake PSD faịlụ furu efu ruru ka ndị na-esonụ: mberede nhichapụ, mbanye formatting, usoro / ngwa nrụrụ aka, nkebi nhichapụ ma ọ bụ nje ọrịa. Ma e wezụga PSD image, ndị ọzọ image usoro dị JPEG, PNG na EPS na-akwado kwa.
Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery omume na-amalite Photoshop PSD faịlụ mgbake si n'okpuru. N'ọnwụnwa a version-enyere gị aka iṅomi gị mbanye na preview hụrụ PSD faịlụ.
Igosi PSD File Iweghachite na 3 Nzọụkwụ
M ga-eji Wondershare Data Recovery maka Windows, nke nwere yiri arụmọrụ na na na Mac version, naghachi PSD faịlụ.
Nzọụkwụ 1 Họrọ mgbake mode naghachi ehichapụ PSD faịlụ
Ị pụrụ ịhụ site oyiyi n'okpuru na ihe omume ahụ ga-enye 3 mgbake ụdịdị n'ihi unu, niile na zuru ezu ntuziaka.
Ị nwere ike ịhọrọ "Echefuola File Iweghachite" mode naghachi ehichapụ, formatted ma ọ bụ merụọ PSD faịlụ.
Nzọụkwụ 2 iṅomi nkebi / mbanye na gị PSD faịlụ furu si
Ebe a gị na mkpa iji họrọ nkebi / mbanye na gị PSD faịlụ furu si na pịa "Malite" ke window na-amalite ịgụ isiokwu furu efu PSD faịlụ.
Ọ bụrụ na ị na-aga na-agbake PSD faịlụ site na a mpụga nchekwa na ngwaọrụ, biko jide n'aka na ọ pụrụ-ọma-ejikọrọ na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3 Naghachi PSD faịlụ
Niile hụrụ faịlụ gị nkebi / mbanye ga-egosipụta na "File Ụdị" na "ụzọ" edemede mgbe scanning. Ị nwere ike họrọ "PSD" faịlụ ụdị ka ịhụchalụ hụrụ PSD faịlụ na ego ma gị furu efu PSD faịlụ nwere ike weghachiri eweghachi ma ọ bụ.
Mgbe ahụ, ị ​​na mkpa iji akara PSD faịlụ gị mkpa ma pịa "Naghachi" button na-azọpụta ha gị na kọmputa.
Cheta na: Iji zere data overwritten, biko họrọ a ọhụrụ nkebi / mbanye ịzọpụta natara PSD faịlụ.